Voatavo sy mofomamy walnut - hahagaga anao izany !! | ThermoRecipes
Mavo sy voatavo
Desayuno68 minitraOlona 8
Ity mofomamy voatavo sy walnut ity dia matsiro ary ny akora ao aminy dia mitambatra tonga lafatra hanome azy a fararano tsiro.
Tsy vao sambany miomana isika mofomamy legioma miaraka amin'ny voanjo ary, ny marina, tsy maninona izany karaoty sy amandy na karaoty misy walnuts satria tena tsara foana izy ireo.
Amin'ity tranga ity dia niaraka taminy a topping fromazy que es matsiro ary izany dia mandeha toy ny fonon-tànana hanatsarana ny tsirony.
ny mofomamy kely mahazatra ao an-tranoko izy ireo ary isan-kerinandro aho dia manao iray farafaharatsiny. Sady ho an'ny sakafo maraina ary ho an'ny sakafo kely dia tiako be izy ireo ary miaraka amina kafe, tonga lafatra izy ireo.
Tsia koa Tiako ny mividy mofomamy indostrialy ary rehefa manandrana izany ny zanako vavy dia manontany ahy bebe kokoa foana izy ireo ... Ary izaho, mazava ho azy, faly.
1 Mavo sy voatavo
Mofomamy tsy ampoizina miaraka amin'ny fangaro misy azy.
Fotoana manontolo: 1h 8M
Kennel 50 g
Voatavo 150 g
150 g ny lafarinina mofomamy
Menaka tanamasoandro 75 g
Masirasira 1 sachet
Kanelina 1 sotrokely
Hafanaina hatramin'ny 170º ny lafaoro amin'ny hafanana ambony sy ambany.
Manosotra ny bobongolo izay hampiasaintsika, miaraka amin'ny menaka mirehitra na dibera ary hafafaho lafarinina kely.
Apetrakay ao anaty vera ireo kennel ary apetaho mandritra izany 15 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 5. Isika dia manala sy mitahiry ao anaty lovia na lovia.
Ampio ny voatavo voatetika sy ny mash ho 20 segondra amin'ny hafainganana mandroso 5-7-9.
Midina miaraka amin'ny spatula izahay, ny sisa tavela teo amin'ny rindrina ary manao programa ny hafa isika 15 segondra amin'ny hafainganana mandroso 5-7-9. Izahay dia mitazona lovia na lovia hafa.
Apetratsika amin'ny lolo ny lolo ary ampio ny atody sy ny siramamy. Izahay dia manao fandaharana 6 minitra, amin'ny hafainganam-pandeha 3 1/2.
Ampio ny ambiny amin'ireo akora arak'ity filaharana ity: voatavo, menaka tanamasoandro, lafarinina, masirasira, sira, kanelina sy kennuts. Afangaro mandritra ny 15 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 4. Raha tsy nifangaro tsara ny zava-drehetra dia ataontsika amin'ny spatula.
Arotsakay ao anaty lasitra izay nohosorantsika namboarina teo aloha io fangaro io.
Atsofontsika ao anaty lafaoro ary avelantsika hahandro eo anelanelan'ny 50 sy 60 minitra amin'ny hafanana mitovy na mandra-pivoakany madio rehefa totofana amin'ny paompy.
Fanazavana fanampiny - Mofo karaoty sy amandy / Mofomamy karaoty sy walnut / Fametahana ny fromazy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Postres » Mavo sy voatavo
Salama, tiako ny mofomamy spaonjy sy ny veromanitra fromazy. Manontany tena aho raha fantatrao ny fiovam-po avy amin'ny grama ka hatramin'ny kapoaka?! Misaotra
Faly aho Paola, mofomamy manan-karena sy tena izy io.
Ny fanovana ho kaopy tsy haiko dia ampiasaiko foana ny lanjan'ny Thermomix. Mirary ny soa indrindra.
Androany aho nanao an'ity mofomamy ity ho an'ny tsindrin-tsakafo, satria manana voatavo be dia be aho. Tsy tiako ny voanjo, fa matsiro ity mofomamy ity, ary miaraka amin'ny fromazy fanosotra eo amboniny ... mmmmmmmmmm. Andro hafa dia hanandrana hazelavo maniry tiako aho.
Fiarahabana avy amin'i Menorca.
Sara, miaraka amin'ny hazavozavo dia azo antoka fa matsiro, holazainao aminay hoe manao ahoana izany rehefa manao azy ianao. Mirary ny soa indrindra.
Salama Elena sy Silvia,
Androany dia namboariko indray ity mofomamy ity ho sakafom-pianakaviana ary nahomby indray! Tsara tokoa, satria malefaka be ny mofomamy ary manome tsiro hafa azy ny voanjo sy ny voatavo, raha ny fraomazy fanosotra mmmmhhh…. Tsy manana teny holazaina aho hoe tsara tokoa izy. Na izany na tsy izany, misaotra betsaka, efa lasa fomba fahandro an'ny fianakaviana io!
Tsara tokoa, Ana!. Faly be aho fa tian'ny rehetra izany. Misaotra betsaka anao nahita anay. Mirary ny soa indrindra.
Te-hanontany anao zavatra hitako fa liana be aho,
amin'ny fomba fahandro mofomamy spaonjy, araka ny fomba fahandro anaovana azy
manta na voatetika ny voatavo ary namboarina niaraka tamin'ny sisa
fangaro. Fantatro izany talohan'ny nanamboarana mofomamy
miaraka amin'ny voatavo dia tsy maintsy nandrahoina teo aloha. Hitako fa tsara ny mitsitsy
fotoana sy ezaka fa mbola tsy naheno an'io.
Andramo izany, Teresa, heveriko fa ho tianao izany. Ny voatavo dia tonga lafatra, izany koa no mitranga amin'ny karaoty sy mofomamy amandy, izay atsipy manta ihany koa. Mirary ny soa indrindra.
Efa nikasa ny hanao an'ity mofomamy ity aho rahampitso, saingy te hahafantatra aho raha ampiana ny takelaka rehefa esorinao ao anaty lafaoro ilay mofomamy, na mafana, na avelanao hangatsiaka izy. Misaotra anao noho ny valinteninao.
Salama Magdalena, nampiana ny fandrakofana raha vao mangatsiaka tanteraka. Manantena aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra.
Salama, manana voatavo kely aho ary te hanandrana manao ny mofomamy, saingy… azonao soloina ve ny lafarinina ho an'ny oat bran ary ny siramamy ho an'ny saccharin misy ranoka hanamaivana ny kaloria? dia hoe mihinana sakafo ary te hampihena ny fomba fahandro araka izay tratra. Azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba ampifanarahana azy amin'ny habetsaky ny saccharin? Misaotra sy arahaba.
Salama Eva, tsy afaka milaza ny endriny aho satria mbola tsy nanandrana azy. Fitoviana 100 gr. ny siramamy = 10 gr. sakramarinina vovoka.
Raha manao izany ianao dia manantena aho fa hanan-karena be izany, hoy ianao amiko. Mirary ny soa indrindra.
gisela dia hoy izy:
Salama, vao nanao ilay mofomamy aho ary ny tena marina dia nivoaka be dia be io, fa te-hanontany anao aho raha afaka mametraka voatavo sy voanjo bebe kokoa ianao, satria toa tsy nisy tsiro io? Misaotra anao.
Mamaly an'i gisela
Salama Gisela, eny afaka manampy bebe kokoa ianao, indrindra ny kennel. Ny voatavo dia kely ny tsirony ary amin'ny mamy dia zara raha tsikaritra. Faly aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra.
Salama Elena, azonao lazaina amiko ve ny topping fromazy, inona izany? Misaotra
Salama Ana, ao amin'ny recette gâteau, raha tsindrio ny "topping fromazy" dia mitondra anao mivantana any amin'ny recipe. Azonao atao ihany koa ny mikaroka azy amin'ny alàlan'ny fanondroana ny fomba fanamboarana. Na izany na tsy izany dia nametraka ny rohy aho: http://www.thermorecetas.com/2010/05/24/Receta-F%C3%A1cil-Thermomix-Cobertura-de-queso/
ANDRY dia hoy izy:
Ny mofomamy sy ny mofomamy walnut dia tena tsara, nataoko lafarinina mofomamy sy fiompiana solika io, tena mena volo. Hanohy hizaha ny fomba fahandro anao aho.
Valiny amin'i PILAR
Faly aho fa tianao izany, Pilar! ary antenaiko fa ny sisa amin'ny fomba fahandro koa. Mirary ny soa indrindra.
Yosune dia hoy izy:
Tsy mampino ny valiny. Volom-borona izy io ary tsy manao jiro mihintsy.
MANKASITRAKA indray ny momba ny resinao
Mamaly an'i Yosune
Misaotra anao, Yosune!
Mapi dia hoy izy:
Tsy fantatro izay mety olana mety hitranga, fa fanindroany izao no anaovako izany, amin'ny hafanam-po fatratra, ary mbola tsy masaka ny foibe. Tsy vita ny fampidirako. Ny tsiro tena tsara, saingy ny endrika… .Tsy azoko izany. Azonao atao ve ny manampy ahy hahafantatra ny antony hitrangan'izany amiko?
Mamaly an'i Mapi
Salama Mapi, ny lafaoro matetika no olana. Maharitra kokoa ny fanendasana azy. Andramo apetraka ny 10 minitra voalohany amin'ny hafanana eo ambany ihany ary ny ambiny hafanana ambony sy ambany. Alohan'ny hamoahana azy dia esory amin'ny paompy ilay izy mba hahitana fa vita. Mirary ny soa indrindra.
Salama Javier, azafady fa nandoro anao io. Miezaka foana izahay mametraka fa miankina amin'ny lafaoro ny fotoana. Ny anay efa antitra ary maharitra fotoana lava. Miankina amin'ny karazana lasitra ihany koa izany. Ataoko amin'ny lava iray nefa misy lavaka eo afovoany ary adiny iray eo vao vita. Mirary ny soa indrindra.
Amin'ny sabotsy dia manana vahiny aho ary nieritreritra ny hanao an'ity mofomamy ity toa azy ...
ho afaka amin'ny asabotsy dia nikasa ny hanao ny sakafo rehetra aho amin'ny zoma (mousakka sy mofomamy spaonjy ho an'ny kafe) fa manana fisalasalana roa aho
1. Ny aubergine ao amin'ny mousaka ve dia vita amin'ny iray andro ka hatramin'ny manaraka tsara?
2. Raha manao an'ity mofomamy ity aho, tsara kokoa ve raha tahiriko ao anaty tupper ilay crème ary ataoko ho azy ireo rehefa manompo azy sa ataoko amin'ny zoma rehetra ary toy izany koa?
Misaotra betsaka amin'ny zavatra rehetra, toy ny mahazatra!
Matetika tsy mampiasa ny solosaina matetika aho, fa lasa adala mahita resipeo mofomamy spaonjy mahazatra vita amin'ny oatmeal amin'ny thermomix, ny resipeo rehetra dia mivoaka tsara miaraka amin'ity hareza ity, saingy tsy manana ny habetsany aho ho an'ny oatmeal ary tena ilaina izany, afaka manampy ahy ve ianao?
Manamarika izahay, tsara tarehy ...
Salama! , Vao hitako ianao, tsy maintsy milaza aminao aho fa tiako ny pejinao, ary farany nanao an'ity mofomamy ity aho, nivadika ho matsiro ary tiako be izany. Ary satria tiako ny mahandro, dia hanao tsindrin-tsakafo hafa tiako aho ... satria mahavariana daholo izy rehetra. Misaotra anao noho ireo resipeo izay andefasanao ahy amin'ny mailako. Miarahaba ary mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka.
Faly izahay fa tianareo izany
Ankehitriny tsy maintsy mihoby ianao na miaraka amin'ny mofomamy hafa na ny fomba fahandro tianao indrindra, ary avy eo lazao anay ny fandehany, okay?
Mofomamy spaonjy inona !!!!!!!!! Vao avy nanao an'io aho ary tena be ranony, mbola tsy nahita an'izany mihitsy aho, indrindra fa toy ny kanelina izy ary mieritreritra aho amin'ny manaraka fa tsy hitetika ny voanjo intsony ahita azy ireo amin'ny sombin-javatra, ny voatavo Ny tena marina dia tsy tiako ny tsirony ao anaty mofomamy, fa na amin'ny manta, satria nihinana sombin-javatra hanandramana azy aho, satria mbola tsy nihinana azy io ary tsy nanam-po izany, saingy hey, ny mofomamy genil, averiko izany
Noemi tokoa, manta ny loha. Hatao ao anaty lafaoro izy io, ary ho eo izy io mamoaka ny hamaminy rehetra. Tsara vintana! Matsiro, ho hitanao.
pacastillo1811 dia hoy izy:
tena tsara maraina te-hanontany anao fanontaniana iray aho fa tsy manana ny robot fa azo atao amin'ny mixer mahazatra miaraka amin'ny fizotran'ny klasika, marina, misaotra ny sary toa manaitaitra
Valiny tamin'i Pacastillo1811
Eny, miaraka amin'ny Thermomix dia mora kokoa io ary tsy dia voaloto isika fa azonao atao amin'ny mixer-nao koa io.
Amaya dia hoy izy:
Hatramin'ny namoahana ny fomba fahandro dia nahavita inarivony tapitrisa aho, lasa foto-tsakafon'ny repertoire-ko sy amin'ny tsindrin-tsakafo izay angatahin'ny fianakaviako, namako ary mpiara-miasa amiko hatao foana. Rehefa nandeha ny fotoana dia tonga lafatra ny fomba fahandro ary tiako hizara izany aminao.
Voalohany, ataoko amin'ny karaoty io fa tsy voatavo, mamadika azy ho mofomamy karaoty. Ampitomboiko amin'ny 80 na 100 grama mihitsy aza ny kennel ary apetaho kely kokoa izy ireo mba ho ao anaty mofomamy. Mamboly koba ihany koa aho, manampy sakamalao vita amin'ny vovoka, nutmeg ary peppers miloko vitsivitsy. Toa adala izy io, fa mahavariana. Manendy azy mandritra ny 37 minitra amin'ny mpahandro vaovao aho ary mizara ny mofomamy ho faritra telo izay nofenoiko ny lasopy fromazy, tamin'ny alàlan'ny ambin'ilay fitaratra mba hamaranana ny fandrakofana ny mofomamy, ary farany dia noravahiko tamin'ny kennel.
Raha ny voatavo no anaovako azy dia mitovy amin'ny mofo izay nohazavaiko tery ambony ihany no anaovako azy, ary zaraiko ho telo koa izy. Ny iray dia tototry ny fromazy Filadelfia toy ny, ary ny iray hafa miaraka amina Jam. Tiako ny mampiasa blackberry an-trano vita amin'ny thx rehefa manana aho. Amin'ny aviavy dia mahavariana ihany koa izy io, saingy heveriko fa mendrika ny olona tianao rehetra… Amin'ny farany, hafafiko amin'ny siram-boasary ilay mofomamy.
Torohevitra farany: raha soloinao siramamy miverimberina ny siramamy sasany dia efa efamira ny faribolana.
Tsy misy isalasalana, ny mofomamy tsara indrindra eto an-tany amin'ny endriny roa….
Valiny tamin'i Amaya
Wow Amaya inona no dikanteny tsara. Misaotra betsaka anao nizara azy 😉 famihinana sy tratry ny taona !!
Legioma legioma, voanio ary voanjo mangatsiaka